ဂန္ဓဝင် အချစ် – Grab Love Story
by phyu June 6, 2021
မောင်နဲ့ ကျမက ဖင်ပြန်ခေါင်းပြန်အနေအထားပေါ့….
ငြင်းဆန်နေလို့လဲ ဘာမှထူးတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး ရှင်….
ကျမရဲ့ တကိုယ်လုံးဟာလည်း ရမက်သွေးတွေနဲ့ ပေါက်ထွက်လုမတတ် ဖြစ်နေရတာကတကြောင်း သူကလည်း စလာပြီမို့ ကျမလည်း တွန့်ဆုတ်မနေတော့ဘဲ သူ့လီးကြီးရဲ့ ဒစ်ကို ငုံပြီး တပြွတ်ပြွတ်စုပ်ပေးလိုက်မိပါတယ်။ ပဲရစ်ဆပ်ပြာမွေး နံ့လေးသင်းနေတဲ့ သူ့ဒစ်ကြီးကို ကျမသိပ်ပြီးချစ်သွားမိပါတယ်။ တဖြေးဖြေးနဲ့ မောင်ရဲ့လီးချောင်းကြီးကို ကျမရဲ့ပါးစပ်ထဲ ရောက်နိုင်သမျှရောက်အောင် သွင်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက် နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကို သူ့ရဲ့လီးချောင်းကြီးပေါ်မှာ ဖိကပ်လိုက်ပြီး လီး ချောင်းကြီးကို ကျမရဲ့ပါးစပ်ထဲသို့ သွင်းချည်ထုတ်ချည်နဲ့ လုပ်ပေးနေမိပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒစ်ဖျားကို လျှာနဲ့လှိမ့်ပြီး ပွတ်လိုက် တေ့ပြီးစုပ်လိုက်နဲ့ လုပ်ပေးတော့ သူ့လီးကြီးဟာ တအားတင်းမာလာပါတယ်။ သူ့ဖင်ကြီးကလည်း ကော့ကော့တက်သွားလေ ရဲ့….နောက် သူ့ဂွေးအုတွေဟာလည်း ကြုံ့လိုက်ပွလိုက်နဲ့ ဖြစ်နေတယ်လေ။ အခုလို ကျမတောင် သေသေသပ်သပ်ကိုင် တွယ်နိုင်ရင် သူရော ဘယ်လောက်ကောင်းအောင် မှုတ်နိုင်မယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းကြည့်ပေါ့ရှင်….။
တခါထဲ ကျမစောက်ခေါင်းထဲကို ကျားလျှာကြီးနဲ့ တိုက်နေသလို အောက်မေ့ရအောင်ကို သူ့လျှာကြီးက စောက် ခေါင်းထဲကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းပွတ်တိုက်နေပါတယ်။ ကျမရဲ့ဖင်နဲ့ ပေါင်ရင်းတဝိုက်က အသားဆိုင်လေးတွေဟာ တဆတ်ဆတ် တုန်နေပါတယ်။ ပြီးတော့ သူက ကျမရဲ့ပေါင်ကြားနဲ့ ဖင်ကြားတွေကိုပါ လျှာနဲ့လိုက်ယက်နေလေရဲ့….သူလျှာဟာ ကျမရဲ့ စောက်ခေါင်းထဲကို အတော်နက်နက်တိုးဝင်ပြီး မွှေပေးနေတယ်လေ….။ ခံစားဖူးရင်တော့ သိမှာပါ….သိပ်အနေရခက်တာပဲ.. …အရသာရှိလိုက်တာလည်း လွန်ရောပဲ….။
ကျမစောက်ခေါင်းဟာ ရှုံ့ချီပွချီဖြစ်တဲ့နှုန်းက သိပ်ပြီးမြန်လာပါပြီ….
ကျမရဲ့ စောက်ခေါင်းထဲမှ သုတ်ရေတွေဟာ ဘွမ်းကနဲ စောက်ခေါင်းထဲကနေ ပန်းထွက်သွားပါတယ်။ အသက်ပါ သွားသလားပင် ထင်ရလောက်အောင် ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ ကျမဖြင့် တကိုယ်လုံးနုံးခွေကျသွားရတာပါပဲ….။ ဒါပေမယ့် ကျမ ဟာ မောင့်လီးကြီးကို ဆက်ပြီး တအားစုပ်ပေးနေမိပါတယ်။ သူ့ဂွေးအုကြီးတွေကလည်း ကိုင်လို့ ကောင်းလိုက်တာရှင်….။
ကျမနာမည်ကိုတပြီး မောင်ဟာ မချိမဆန့်ညီးတွားလိုက်ပါတယ်။ ရုတ်တရက် ကျမသီးသွားမိပါတယ်။ သူ့သုတ်ရည် တွေဟာ ကျမရဲ့ပါးစပ်နဲ့ မဆန့်လို့ နှာခေါင်းထဲက ပြန်ထွက်လာတယ်လေ…။ တမျိုးအရသာပါပဲ ပျစ်ချွဲပြီး ညှီတဲ့အနံ့လေး နည်းနည်းရှိတယ်။ လီးထဲမှာ တစ်စက်မှမကျန်တဲ့အထိ ကျမဟာ တစစ်စစ်နဲ့ စုပ်ယူနေမိပါတယ်။
နှစ်ယောက်သားဖက်ပြီး အတော်ကြာအောင် နေမိပါတယ်။ ခဏကြာတော့မှ သူကထပြီး ကျမနဲ့ဘေးချင်းယှဉ်ပြီး လှဲချလိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုလှဲချလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲ မောင်က ကျမဖက်ကို စောင်းလိုက်ရာ ကျမရဲ့ကိုယ်လုံးလေးကို ဖက် လိုက်ပြီး ကျမရဲ့နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို စုပ်နမ်းပါတယ်။ ကျမလည်း သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကို အလိုက်သင့်ပြန်ပြီး စုပ်နမ်းပေးလိုက်ပါ တယ်။ ကျမရဲ့လက်တစ်ဖက်က သူ့ရဲ့ပြောင်သလင်းခါနေတဲ့ ကျောပြင်ကြီးကို ပွတ်သပ်ပေးနေသလို သူ့လက်တစ်ဖက်က ကျမရဲ့နို့နှစ်လုံးပေါ်မှာ ပြေးလွှားလှုပ်ရှားနေပြီး ကျန်တဲ့လက်တစ်ဖက်ကတော့ ကျမရဲ့ကိုယ်လုံးတီးလေးတစ်ခုလုံးကို အနှံ့ပင် ပွတ်သပ်ချေမွနေပါတယ်။ ကျမ ကလျာနဲ့ ကျမရဲ့ချစ်သူ ကိုမျိုးဇင် တို့ဟာ ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတာ (၆)လ လောက်ပဲရှိပါသေး တယ်။ မလေးရှားမှာ အလုပ်ရသွားပြီဖြစ်တဲ့ ကိုမျိုးဇင်ဟာ မနက်ဖြန်ဆို လေယာဉ်ပေါ်တက်ရတော့မှာပါ။ ဒါကြောင့်လည်း သူ့ကို ကျမက အစွမ်းကုန်လိုက်လျောနေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်….။ ကျမနဲ့ မောင်ဟာ နှုတ်ခမ်းချင်း မခွာစတမ်းစုပ်ကာ တစ် ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပွတ်သပ်ဆုတ်နယ်နေကြပြီး ခဏအကြာမှာပဲ ကျမရဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးထဲက စောက်ရည်တွေဟာ တကျော့ပြန်ပြီး စိမ့်ထွက်လာရပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကျမ သူ့လီးကြီးကို ကြည့်လိုက်တော့လည်း ခေါင်းတဆတ်ဆတ်ငြိမ့်နေပြီး အကြောကြီးတွေ အပြိုင်းပြိုင်းထနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အိပ်ယာပေါ်မှာ ဘေးတစောင်းလှဲကာ မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီး နှုတ်ခမ်းချင်းစုပ်နေတဲ့ ကျမရဲ့စောက်ဖုတ်နဲ့ မောင်ရဲ့လီးထိပ်တို့ဟာ တဲ့တဲ့ကြီးပဲ ထိုးထောက်မိနေပါတယ်။ ဒါကိုကြည့်ခြင်း အားဖြင့် မောင့်ရဲ့အရပ်နဲ့ ကျမရဲ့အရပ်ဟာ တန်းတူဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သိနိုင်ပါတယ်။ မောင့်အရပ်က (၅)ပေ (၇)လက်မ ကျော်လောက်ရှိပြီး ကျမရဲ့အရပ်က (၅)ပေ (၇)လက်မ အတိရှိပါတယ်။ ကျမဟာ ကျမရဲ့အရပ်အမြင့်နဲ့ လိုက်ဖက်ညီတဲ့ ၃၆၊ ၂၃၊ ၃၈ ဆိုတဲ့ ပါရမီကောင်းလှတဲ့ သူတွေသာ ပိုင်ဆိုင်ရတဲ့အချိုးအစားကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။
ကျမအသက်က ခုမှ (၂၀) ထဲ ရောက်ရုံရှိပါသေးတယ်။ ဒီအသက်အရွယ်နဲ့ ဒီလိုကိုယ်လုံးမျိုးပိုင်ဆိုင်ထားရတာက လည်း ကျမအဖေက အီတာလျံနဲ့ မွန်ကပြားဖြစ်သလို ကျမရဲ့အမေကလည်း ဆစ်နဲ့ မွန်ကပြားတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ကပြားသွေးတွေနှောနေတဲ့ ကျမရဲ့ ကိုယ်လုံးဟာ ထွားထွားကြိုင်းကြိုင်းနဲ့ ရှိရုံမျှမဟုတ်သေးဘဲ အသားအရည်ကလည်း ဖြူဖွေးပြီး မျက်ခုံး၊ နှာတံ၊ မျက်တောင် တွေက ဆစ်ဘက်ကိုနွယ်ပါတယ်။ မျက်လုံးနဲ့ ဆံပင်တွေက အီတာလျံဘက်နွယ် သွားပြီးတော့ အသားအရည်ကျတော့ မွန် ဘက်ကို တခါနွယ်သွားရပါတယ်။ ဒီတော့ ကျမကို တွေ့မြင်မိတဲ့ ယောက်ျားတွေ ပျိုပျိုအိုအိုအရွယ်မျိုးစုံတွေဟာ သူတို့ရဲ့မျက် လုံးတွေကို ကျမဆီကနေ ဗြုံးကနဲ မခွာနိုင်ကြပါဘူးရှင်….။ ခုဘဲကြည့် မောင်ဆို လည်း ကျမကို အတင်းကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ ကျမကို လိုးချင်လွန်းတဲ့ သူ့လီးဟာ တဆတ်ဆတ်တုန်နေပြီလေ….။ ကျမရဲ့နှုတ် ခမ်းတွေဆီကနေ မောင်ဟာ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းပဲ ဆွဲခွာပြီး ထလိုက်ပါတယ်။ ကျမကို အာသာငမ်းငမ်းဖြစ်နေ တဲ့ သဘောပါပဲ….။ ပြီးတာနဲ့ မောင်က ကျမရဲ့ကိုယ်လုံးကို ကုတင်ပေါ်မှာ ကန့်လန့်ဖြတ်ဖြစ်အောင် ရွေ့ပြောင်းပေးလိုက်ပါ တယ်။ ပြီးတော့ ကျမရဲ့ဖင်ကြီးကို ကုတင်စောင်းမှာ ကျကျနနတင်ပြီးတော့ သူက ကုတင်အောက်ကို ဆင်းလိုက်ပါတယ်။ ပြီး တာနဲ့ ကျမရဲ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ဆွဲကိုင်ကာ မြှောက်လိုက်ပြီး သူ့ရဲ့ပုခုံးတဖက်တချက်မှာ တင်လိုက်ပါတယ်။ သူ့မျက် လုံးတွေကလည်း ကျမရဲ့တကိုယ်လုံးကို မျက်လုံးတွေကျွတ်ထွက်မတတ် စိုက်ကြည့်နေပါတယ်။ အဲဒီနောက် မောင်က သူ့ လက်တဖက်နဲ့ လီးချောင်းမာမာကြီးကို ကိုင်ပြီးတော့ ကျမရဲ့ မာတင်းနေတဲ့ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုကြားကို တေ့ ထောက်လိုက်ပြီး အကွဲကြောင်းတလျှောက် ဖိပြီးပွတ်ပေးနေပါတယ်။
ကျမက သိပ်ခံချင်နေပါတယ်လို့ပြောရင် ကျမကို အရှက်မရှိတဲ့သူလို့ မသတ်မှတ်စေချင်ပါဘူး။ ကျမစောက်ခေါင်းထဲ က မနေနိုင်အောင် ယားတက်လာပါတယ်။ ဖင်ကြီးကို တကော့ကော့နဲ့ သူ့လီးကြီးကို ကြိုလင့်နေမိပါတယ်။ ဒါကိုသိတဲ့ ကိုမျိုးဇင်ကလည်း ကျမရဲ့စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းတလျှောက် ဖြေးဖြေးချင်းပွတ်တိုက်ပေးနေတဲ့ သူ့ရဲ့လီးကြီးထိပ်ဖူးကို စောက်ပတ်ဝမှာ အသာတေ့လိုက်ပြီး လိုးသွင်းလိုက်ပါတော့တယ်။
” ဗြစ်….ဗြစ်….အ….ဗြစ်….အင်း….ဟင်း…ဟင့်….မောင်…ဖြေး…ဖြေး….ဗြစ်….အား….ဗြစ်…ဒုတ်….အမလေး….. လေး….သေပါပြီ….မောင်ရဲ့….”
မောင်က ကျမရဲ့စောက်ခေါင်းထဲသို့ လီးကို မနားတမ်းချော့သွင်းရင်း ကျမရဲ့အပျိုမှေးကို ထိုးခွဲပစ်လိုက်တယ်လေ…။ ပြီးတော့ လီးကိုဆက်မသွင်းသေးဘဲ ရှေ့တိုးနောက်ငင်နဲ့ ညှောင့်ပြီးလိုးနေပါတယ်။ ကျမ နည်းနည်းကျင့်သားရလာတော့မှ တအားဆောင့်ချလိုက်တော့တယ်။
သူ့လီးထိပ်ကြီးက ကျမရဲ့သားအိမ်ကို ပြေးဆောင့်လိုက်တော့ ရင်ခေါင်းထဲမှာ အောင့်သွားတာပါပဲ….။ လီးဟာ ကျမ စောက်ခေါင်းထဲမှာ ကြပ်သိပ်ပြီး ရင်ထဲမှာ ပြည့်ပြည့်ဝဝကြီး ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ ကျမရဲ့စောက်ဖုတ်ထဲကို လိုးနေတဲ့ သူ့ရဲ့ လီးကို ကျမက စောက်ခေါင်းနဲ့စုပ်ပြီးဆွဲထားမိပါတယ်။ ဒါကြောင့် လီးသွင်းရင် စောက်ခေါင်းဟာ နစ်ဝင်ပြီး လီးပြန်ထုတ်ရင် ကျမရဲ့ဝမ်းထဲက အသဲတွေအူတွေပါသွားပြီး ထွက်ကျသွားသလို ခံစားရပါတယ်။ သူက ကျမရဲ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို သူ့ ပုခုံးပေါ်မှာတင်ထားရက်ပဲ သူ့လက်နှစ်ဖက်က ကျမရဲ့နို့အုံနှစ်လုံးကို ဆွဲပြီး ဆောင့်လိုးနေပါတယ်။ သိပ်ကောင်းတာပဲရှင်…. ကျမဟာ ကုန်းပေါ်ကိုပစ်တင်ခံလိုက်ရတဲ့ ငါးတစ်ကောင်လိုပဲ ကျမရဲ့ပါးစပ်က ဟစိဟစိနဲ့ တဟင်းဟင်းငြီးမိနေပါတယ်။ တဖြေးဖြေးနဲ့ ကျမဟာ ခံရတာအားမရနိုင်တော့ပါဘူး။ ကျမရဲ့ဖင်ကြီးကိုသာ တွင်တွင်ကော့ပေးနေမိပါတယ်။ ဒါကိုရိပ်မိတဲ့သူ က သူ့ပုခုံးတဖက်တချက်မှာ ထမ်းထားတဲ့ ကျမရဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ကျမရဲ့ရင်ဘတ်ပေါ်ကိုလှန်ပြီး တင်ပေးလိုက်ပါ တယ်။ ဒူးတော့ နည်းနည်းကွေးသွားပါတယ်။ ကျမလည်း လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ကျမရဲ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ပြန်ဆွဲပြီး ထိန်း ပေးထားလိုက်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ကျမရဲ့ဖင်ကြီးတွေဟာ ကုတင်စောင်းကနေကြွပြီးတော့ တက်လာကာ စောက်ဖုတ် ကြီးဟာလည်း ဖွင့်ပေးလိုက်သလို ကော့တက်ပြီး ပြဲအာသွားတဲ့အချိန်မှာပဲ မောင့်ရဲ့လီးဟာ ရက်ရက်စက်စက်ပဲ ဆောင့်လိုး လာပါတော့တယ်။
” ဒုတ်….အား….ဗြစ်….ပြွတ်….ဗြစ်….ဗြစ်….ဒုတ်….အင့်….အမေ့….အ….အား….ပြွတ်….ပြစ်….ဗြစ်…ဒုတ်…အီး.. …ရှီး…ကျွတ်….ကျွတ်…ကောင်းလိုက်တာ….မောင်ရယ်….အား….”
အခန်းထဲမှာ အသက်ရှုသံ ငြီးသံ လီးနဲ့စောက်ဖုတ်ရိုက်သံတွေဟာ ဆူညံနေပါတယ်။ ကျမရဲ့စောက်ဖုတ်ကလည်း သူ့လီးကို အတင်းဆွဲစုပ်နေတယ်။ အားရလောက်အောင် မာကြောနေတာပဲ ရှင်….။ နောက်ထပ် (၅)မိနစ်လောက်ကြာတဲ့ အခါမှာတော့….
နှစ်ယောက်စလုံး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် တင်းတင်းကြီးဖက်လိုက်ကြရင်း တွန့်လိမ်လှုပ်ရှားသွားရာမှ ငြိမ်ကျ သွားကြပါတော့တယ်ရှင်….။
ကျမက ကျောင်းမပြီးသေးပါဘူး….အခု ကျောင်းပြန်ဖွင့်ရင်တော့ နောက်ဆုံးနှစ်ကို တက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်း ပိတ်ရက်ဖြစ်နေလို့ ထုံးစံအတိုင်းပဲ ကျမဟာ သူငယ်ချင်းတွေဆီ လျှောက်လည်နေတာပေါ့…။ ကျမချစ်သူ ကိုမျိုးဇင်ကလည်း မလေးရှားထွက်သွားတာ (၃)လတောင် ကျော်သွားပါပြီ…။ ဒီနေ့လည်း သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ ပဲခူးကိုလိုက်လည်မလို့ရှိ တာနဲ့ ဒက်ဒီရုံးမသွားခင်မှာဘဲ ဒက်ဒီကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြီး မိုးချုပ်လောက်မှပြန်ရောက်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း ခွင့် တောင်းပြီး ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်းအိမ်ကိုရောက်တော့ သူတို့အဖိုးနဲ့ အဖွား နေ့လည်လောက်မှာ မန္တလေး ကရောက်လာမှာဖြစ်လို့ ဒီနေ့ ပဲခူးမသွားဖြစ်သေးကြောင်း သိလိုက်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမက သူငယ်ချင်းအိမ်မှာပဲ နေပြီး နံနက်စာပင် စားလိုက်ပါသေးတယ်။ သူတို့မိသားစု လေဆိပ်ကို သွားတော့မယ်ဆိုတော့မှ ကျမလည်း အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါ တော့တယ်။ ခြံထဲအဝင်မှာပဲ အိမ်ရှေ့ဆင်ဝင်အောက်မှာ ဒက်ဒီရဲ့ကားရပ်ထားတာတွေ့လို့ ဒီနေ့ဒက်ဒီ အစောကြီး ပြန်ရောက် နေတာတွေ့လိုက်ရလို့ ကျမဟာ ဒီနေ့ ဒက်ဒီနဲ့ အေးအေးဆေးဆေးနေနိုင်ပြီဆိုပြီး ပျော်သွားရပါတယ်။ ဒက်ဒီက ကုမ္ပဏီ ထောင်ထားပြီး အလုပ်သိပ်များတဲ့သူပါ။ မနက် (၇)နာရီသာသာလောက်ကနေ အိမ်ကထွက်သွားပြီး ည (၉)နာရီ (၁၀)နာရီ လောက်မှ အိမ်ပြန်ရောက်တတ်တဲ့သူပါ။ အခုနေ့လည် (၁၂)နာရီလောက်ပဲရှိသေးတယ်။ ဒက်ဒီက အိမ်ကိုပြန်ရောက်နေပါပြီ။ ကျမလည်း အိမ်ဘေးမှာပဲ ကားကိုရပ်လိုက်ပြီး အိမ်ထဲကို ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒက်ဒီဟာ ခါတိုင်း သူထိုင်နေကျနေရာမှာ မရှိပါဘူး။ ကျမ စိတ်ပူသွားမိတယ်။ ဒက်ဒီ နေများမကောင်းလို့လားလို့ စိုးရိမ်စိတ်ကလည်း ဝင်သွားမိပါသေးတယ်။
ဒီလိုစကားသံသဲ့သဲ့ကို ကြားလိုက်မိတယ်ဆိုရင်ပဲ ကျမခေါင်းတွေ ထူပူသွားမိပါတယ်။ ဒက်ဒီမိန်းမပွေနေသလားဆို တဲ့အတွေးကလည်း ရောက်သွားရပါတယ်။ ဒါကြောင့် စပ်စုလိုစိတ်နဲ့ အိပ်ခန်းတံခါးနားရောက်အောင်သွားပြီး ကပ်ပြီးနား ထောင်လိုက်တယ်။
” အိုး….အကိုကြီးကလဲ….သိပ်ကဲတာပဲ….ဒီမှာ အင်္ကျီတွေကြေကုန်ပြီ….”
ဟုတ်ပါပြီ….ဟုတ်ပါပြီ တံခါးကို သေချာပိတ်ထားလို့ အသံသဲ့သဲ့သာကြားရပေမယ့် ဒက်ဒီတစ်ယောက် ကျမအလစ် မှာ ကမြင်းကြောထနေပြီ။ သေချာပါပြီ ကျမကလည်း မနက်က ပဲခူးသွားဘို့ မိုးချုပ်မှပြန်ရောက်မယ်ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ တံခါးဖွင့်ပြီး ဝင်သွားမယ်လုပ်ပြီးမှ ကိုယ်ရှိန်သတ်လိုက်ရတယ်။ နင်နဲ့ဘာဆိုင်လဲလို့ ပြောရင် ကျမဘာပြောရမလဲ….။ ဒက်ဒီ ကိုယ်တိုင်က ကျမကို ဘာမျှထိန်းသိမ်းချုပ်ချယ်တာမဟုတ်ဘူး….ဟင်း….ဒက်ဒီသိပ်ဆိုးတယ်….။ ဒက်ဒီ့ကို အပိုင်ကိုင်ချင်တဲ့ ကောင်မ ဘယ်သူလဲ…ကျမ သိချင်လာတယ်။ ဒါကြောင့် ဒက်ဒီ့အခန်းရှေ့ကို ကျမက ခြေသံမကြားအောင် ဖွဖွလေးဖြတ် လျှောက်သွားပြီး ကျမရဲ့အခန်းကို အသာလေးဖွင့်ကာ ဝင်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ကျမရဲ့အခန်းတံခါးကို အသေအချာ ပြန်ပိတ်ပြီး ဒက်ဒီအခန်းနဲ့ ကျမအခန်းကိုခြားပြီး ကာထားတဲ့ ကျွန်းပြားတွေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ နံရံဘေးကို အသာတိုးကပ်လိုက်ပါ တယ်။ အဲဒီနံရံမှာ ကျွန်းပြားနှစ်ချပ်ဟာ အရှည်လက်မဝက်နီးပါး နည်းနည်းလေးဟနေတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီနေရာ လေးကို ကျမရဲ့မျက်နှာကပ်မယ်အလုပ်မှာပဲ ကျမဟာ စိတ်ထဲမှာ သိပ်မရဲဘူးဖြစ်သွားရပါတယ်။ ဖအေမယားငယ်နေတာကို သမီးကချောင်းလို့ မကောင်းပါဘူး….။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ စုံစမ်းတာပဲ…ချောင်းတာမဟုတ်ဘူးလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အားပေးပြီး အပေါက်လေးဆီကို ကျမ မျက်နှာအပ်လိုက်ပါတော့တယ်။
ဟုတ်တယ်….ကျမ အသံမထွက်အောင်ဘဲ ဆဲလိုက်မိပါတယ်။ ကြည့်လေ ဟိုအခန်းထဲမှာ ကျမရဲ့ဒက်ဒီကို မြူဆွယ် နေတဲ့ကောင်မက သီတာမိုးပေါ့….။ ကုတင်စောင်းမှာ ဖင်တစ်ခြမ်းကိုတင်ပြီး ထိုင်နေတယ်။ သူ့ဘေးမှာ ဒက်ဒီက သူ့ခါးကို ဖက်ပြီးထိုင်နေတယ်။ ပြီးတော့ ဒက်ဒီက သူ့မျက်နှာကို နမ်းနေပြန်ပါတယ်။
” အို…အကိုကြီးရယ်….မိတ်ကပ်တွေ ပျက်ကုန်ပါအုံးမယ်…ရှင်…”
ကျမ သိပ်ဝမ်းနည်းမိတယ်…။ ဒက်ဒီဟာ ဒီကောင်မရဲ့ ခါးကို ကိုင်ပြီး အတင်းစေ့ထားတဲ့နှုတ်ခမ်းကို အငမ်းမရစုပ်နေ လေရဲ့ ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ….ဒက်ဒီရယ်….။ ဒီလိုဆင်းရဲမွဲတေနေတဲ့ တောကြုံအုံကြားက ကောင်မကိုမှ မယားငယ်ထားချင်ရသ လား။ သီတာမိုး က ဒက်ဒီရဲ့အတွင်းရေးမှူးမလေးပါ။ ကျမနဲ့ သက်တူရွယ်တူဖြစ်ပြီး ကျမလောက်နီးနီးလည်း လှပါတယ်။ ကျမ မျက်လုံးအကြောင်သားနဲ့ ကြည့်မိနေတဲ့အချိန်မှာပဲ ဒက်ဒီက ကောင်မလေးရဲ့ ခါးသေးသေးကျဉ်ကျဉ်လေးကို သိုင်းဖက် ပြီး နှုတ်ခမ်းကို တအားစုပ်နေလေရဲ့….
ကောင်မကလည်းကြည့် ပိုင်းလုံးမပီပီ အရှက်မရှိဘူး ဒက်ဒီလည်ပင်းကို သိုင်းဖက်ပြီး မျက်နှာကိုအတင်းမော့ပေးနေလေရဲ့…
” မောတယ်…ကိုကြီးရယ်…ကိုကြီးကို ချစ်လို့သာ ဒီလိုအခန်းထဲကို မိန်းကလေးတန်မဲ့လိုက်ခဲ့ပြီမဟုတ်လား…သီတာ ဘယ်တုန်းကမှ သူများအိမ်မလည်ဖူးခဲ့ဘူး….ကိုကြီးကို ချစ်လို့သာပေါ့….ပြီးတော့လေ ကိုကြီးကို သနားတယ်….”
” အို….ကိုကြီးကလည်း သီတာကို ပလီနေတယ်များထင်နေလို့လား….”
” မဟုတ်ပါဘူး အချစ်ရဲ့…ကိုကြီးကလေ သီတာကို ချစ်လွန်းလို့ပါ…ဖြစ်နိုင်ရင်ငုံတောင်ထားချင်တယ်….”
” ဒါပဲနော်…လိုချင်တာရပြီးရင်တော့ တမျိုးမပြောနဲ့…”
” သီတာကို အခု ကိုကြီး ဒီကိုခေါ်လာတာက ကိုကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြောဖို့နဲ့ သီတာဆီက ခွင့်တောင်းချင်လို့…”
” ကိုကြီး သီတာကို လက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်….ဒီတော့ သီတာက ကိုကြီးရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကို လက်ခံပါ…”
ကျမခေါင်းပေါ်ကို တဲ့တဲ့ကြီး မိုးကြိုးပစ်ချလိုက်သလိုပါပဲ။ ဒက်ဒီ သိပ်ရက်စက်တယ်….ကျမကိုတောင် ဘာမှအသိ မပေးဘူး။ မသကာဆို ကျမကို နည်းနည်းပါးပါး ပြောပြထားသင့်တာပေါ့….။
” ဖြစ်ပါ့မလား ကိုကြီးရယ်…ကလျာက သီတာနဲ့ မတိမ်းမယိမ်းလေးနော်….ဘေးလူအမြင်မတော်ဘူးကွယ်….ကလျာ ကလည်း သဘောတူမယ် မထင်ဘူး….ကိုကြီးရယ်….”
” အို….သမီးက ဒီလောက်သဘောထားမသေးပါဘူးကွယ်…ကိုကြီးပြောရင်ရပါတယ်…ကိုကြီး သိချင်တာ အချစ်ရဲ့ အဖြေကိုပဲ…”
” သီတာ ကြောက်တယ် ကိုကြီးရယ်….ပတ်ဝန်းကျင်က သီတာ့ကို ဘယ်လိုပြောမလဲ…”
” အို…ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားနေတာ ဘယ်သူ့ကို ဂရုစိုက်ရမှာလဲ…ပေါင်းရမှာက ကိုကြီးနဲ့သီတာပါ…”
” ဟင်း…ကိုကြီး သဘောပါပဲလေ…နောက်မှသာ သီတာဒူးနဲ့မျက်ရည်သုတ်မနေပါရစေနဲ့ ကိုကြီးရယ်…”
ဟွန်း….သိပ်ပြီးသနားဖို့ကောင်းတယ်…ပိုင်းလုံးမ စကားသိပ်တတ်….ကျမ ငိုချင်စိတ်တောင်ပေါက်လာပါတယ်။ လွန် ခဲ့တဲ့ (၃)နှစ်လောက်က ကွယ်လွန်သွားတဲ့ မာမီရဲ့နေရာမှာ သူကဝင်လာချင်တယ်…ပြီးတော့ ကျမချစ်တဲ့ဒက်ဒီကို ကျမ ရဲ့ ရင်ခွင်ထဲကနေ လုယူသွားချင်တယ်….ကျမကို ဘာရန်ငြိုးမှမရှိဘဲ ဘာလို့ဒီလိုများ ရက်စက်ရတာလဲ…သီတာစိုးရယ်…ဒီ ကောင်မအိမ်မှာလာပြီး အရာရာသြဇာလာပေးနေရင် ကျမဘယ်လိုနေရမှာလဲ….ဒက်ဒီရယ်…သမီးအတွက် နည်းနည်းလေးမှ ထည့်ပြီးမစဉ်းစားတော့ဘူးလား…သမီးကဖြင့် ဒက်ဒီအတွက် အစစအရာရာစဉ်းစားလိုက်ရတာ…ဒက်ဒီမှာ သမီးတစ်ယောက် လုံးရှိသေးတယ်ဆိုတာ သတိမှရသေးရဲ့လား…ကြည့်လေ သူ့ကောင်မနဲ့ ကြည်နူးနေလိုက်ကြတာ…ကျမမျက်လုံးအိမ်ထဲက မျက်ရည်တွေ ဒလဟောကျလာပါတယ်…အရွယ်ရောက်ပြီးမှ ဒါ ပထမဆုံးအကြိမ် ကျရခြင်းပါ…မျက်ရည်တွေဟာ တားမနိုင် ဆီးမရ တွေတွေကြီးကျနေပေမယ့် ရှေ့ကမြင်ကွင်းကတော့ ဝေဝါးမသွားပါဘူးရှင်….။
ကြည့်လေ….ဒက်ဒီရဲ့လက်တွေက သီတာစိုးရဲ့အင်္ကျီကြယ်သီးတွေကို တယုတယဖြုတ်ပေးနေတယ်။ သီတာစိုး ကလည်း မျက်လုံးတွေစုံမှိတ်လို့ ကလေးတစ်ယောက်လို ငြိမ်နေလေရဲ့….ကြည်ပြာရင့်ရောင်အိပ်ယာခင်းပေါ်မှာ ထိုင်နေတဲ့ သီတာစိုးရဲ့အလှဟာ ပြိုင်စံရှားအလှပါလို့ပြောရင် ဘယ်သူမှငြင်းမယ်မထင်ဘူး။ နို့နှစ်ရောင်အသားအရေဟာ ကြည်ပြာရင့် ရောင် အောက်ခံအိပ်ယာခင်းပေါ်မှာ ထင်းထင်းကြီးလှလို့နေပါတယ်။ ကျမကြည့်နေရင်းနဲ့ပဲ သီတာစိုးရဲ့ အင်္ကျီကြယ်သီးတွေ ပြုတ်သွားပါတယ်။ နည်းတဲ့နို့ကြီးတွေ မဟုတ်ဘူး…ကြီးမားမို့မောက်ပြီး ထောင်ထနေတယ်။ ဒက်ဒီက သူ့ကိုယ်ပေါ်က အင်္ကျီလေးကို ချွတ်ပစ်လိုက်တယ်။
သူ့အသံဟာ ကျမကိုတောင် လွမ်းမောသွားစေရပါတယ်။ ချွဲသံလည်း မဟုတ်ဘူး…ရှက်သံလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဘာ ရယ်လုိ့ပြောရခက်တဲ့အသံပေါ့…တမျိုးလေးပဲ…။ ဒက်ဒီက သူ့ဘရာစီယာကို ဖြုတ်နေတုန်း တိုးတိုးလေးငြီးလိုက်တာလေ…။ ကြည့်ပါအုံး…ထိပ်မှာပတ္တမြားပွင့်လေးတွေ တင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ လှလိုက်တဲ့နို့ကြီးတွေ ဖွေးဥနေတာပဲ..။ ကျမကြည့်နေတုန်း မှာပဲ ဒက်ဒီဟာ သူ့နှုတ်ခမ်းမွှေးကားကားကြီးတွေကိုမှအားမနာဘဲ သီတာစိုးရဲ့နို့တစ်ဖက်ကို ငုံလိုက်တယ်။
” အင့်…ဟင်း….ယားတယ် ကိုကြီးရဲ့…”
ကောင်မလေးခါးကြီးကော့တက်လာပြီး မချိမဆန့်လေး ငြီးပြောလေးပြောလိုက်တယ်။ ကျမရင်ထဲမှာလေ…မရိုးမရွ ကြီးကို ဖြစ်လာရပါတယ်။
ဒက်ဒီခေါင်းကိုလက်နဲ့ပွတ်ရင်း မရှုနိုင်မကယ်နိုင်အောင် ငြီးနေလေရဲ့…။ မိခင်က ကလေးကို နို့တိုက်သလိုပဲ ဒီဖက် တဖက်ပြီးတော့ ဟိုဖက်တဖက်ကို ပြောင်းပေးတယ်။ ကျမရင်တွေတဒိန်းဒိန်းခုန်လာတယ်။ ကိုယ့်နို့ ကိုယ်အသာပြန်ပြီး ဆုတ် နယ်ကြည့်မိတယ်။ အားမရတာနဲ့ အင်္ကျီကို ကြယ်သီးဖြုတ်ပြီး ဘရာစီယာကို မတင်လိုက်တယ်။ လက်သီးဆုတ်နီးနီးရှိတဲ့ နို့ နှစ်လုံးကို ကိုင်ပြီး အသာညှစ်တယ်။ အိုး…စီးပိုင်နေတာပါပဲ…။ ထူးထူးခြားခြား ကျမနို့တွေ တင်းမာနေတာကို သတိထားမိ တယ်။ နို့သီးတွေဟာလည်း သာမန်အချိန်မှာလို အရေပြားနဲ့ တသားတည်းကပ်မနေဘဲ အပြင်ကို သိသိသာသာကြီး ထောင် ထပြီးနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ကျမသတိပြန်ဝင်လာပြီး ကြည့်လိုက်တော့ ကျမရဲ့ ရင်ထဲမှာ အေးကနဲဖြစ်သွားရပါတယ်။ ဒက်ဒီဟာ သီတာစိုးရဲ့ ထဘီကို အသာဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်ပြီလေ…။ ဖြူဖွေးလုံးကျစ်ပြီး ဖြောင့်စင်းတဲ့ပေါင်တန်တွေဟာ သူမဝတ်ထားတဲ့ပင်တီအနက် ထဲကနေ ထိုးထွက်နေလေရဲ့…။ စောက်ဖုတ်နေရာဟာ ဖောင်းမို့နေလိုက်တာလေ…ကျမတောင် သီတာစိုးကိုကြည့်ပြီး တပ် မက်စိတ်တွေပေါ်လာတယ်။ ဒက်ဒီဆိုတဲ့ မုဆိုးဖိုယောက်ျားကြီးတစ်ယောက်တော့ ပြောမနေနဲ့တော့…။
” ကြည့်…အရမ်းကို ကဲနေပါလား….သီတာကို မသနားတော့ဘူးလား…ကိုကြီးရယ်….သီတာရှက်လို့သေတော့မယ်.. …”
ဘယ်လောက်ပဲရှက်နေနေ သူ့ပင်တီဘောင်းဘီအနက်လေးဟာ လိပ်ပြီးခြေထောက်နှစ်ချောင်းကနေ ကျွတ်ထွက် သွားပြီလေ…ကျမမြင်ဖူးသမျှ စောက်ဖုတ်တွေထဲမှာတော့ သီတာစိုးရဲ့ စောက်ဖုတ်ဟာ အဖောင်းဆုံးအမို့ဆုံးပါပဲ။ ရှေ့ဖက် ကိုအတော်လေးရောက်အောင် ဖောင်းမို့နေတာ အဆီတဝင်းဝင်းနဲ့ပေါ့…။ စောက်စေ့လေးဟာ စောက်ပတ်ကြားကနေ တိုး ထွက်နေတာ တွေ့ရတယ်။ အမွှေးတွေဟာ မဟူရာရောင်တောက်နေတယ်။ ဒက်ဒီလက်တွေ တုန်နေတယ်…။ ကြည့်ရတာ ရယ်စရာကြီး။ ဘာလဲ ကြောက်လို့လား။ ဒက်ဒီက သီတာစိုးရဲ့စောက်ဖုတ်ကို တုန်တုန်ရင်ရင်နဲ့ လက်ဖဝါးနဲ့အုပ်ပြီး ပွတ်သပ် နေတယ်။ ဟိုကောင်မကလည်း ပေါင်ကို မသိမသာနဲ့ ဟဟပေးနေတယ်။ သိပ်ခံချင်နေပုံပဲ။ ဒါပေမယ့်…ဒက်ဒီက သူ့ကို မလိုး သေးဘူး။ ကောင်မကို ကုတင်ပေါ်က အိပ်ယာထူကြီးပေါ်ကို တွန်းလှဲလိုက်တယ်။ ဒီကုတင်ကြီးက မာမီရှိစဉ်ကတည်းက ဒက်ဒီနဲ့အတူ အိပ်တဲ့ ကုတင်ကြီးနဲ့ မွေ့ယာကြီးလေ။ ပြီးတော့ ဒက်ဒီက သူမရဲ့ပေါင်နှစ်ဖက်ကို တဖက်တချက်စီကို ဖြဲချလိုက် တယ်။ ဒီတော့မှ သီတာစိုးရဲ့စောက်ပတ်ကို သေသေချာချာမြင်ရတယ်။ ပန်းနုရောင်သန်းပြီး စောက်စေ့ကြီးက အရှည်ကြီး အထဲနှုတ်ခမ်းလေးတွေက တွန့်လိပ်နေတယ်။ လျှို့ဝှက်စွာပွင့်နေတဲ့ နှင်းဆီတစ်ပွင့်ပါပဲ…။ ဒက်ဒီဟာ သီတာစိုးရဲ့စောက်ဖုတ် ကို သူ့လက်မနှစ်ဖက်နဲ့ဖြဲပြီး သေချာကြည့်နေတယ်။
” အို…ဘာလုပ်နေတာလဲလို့…ဒီမှာရှက်လို့ သေတော့မယ်…”
တုန်တုန်ရီရီလေးပြောသံကြောင့် သတိဝင်လာဟန်နဲ့ ဒက်ဒီက သက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်။
” လှလည်း မကြည့်နဲ့…ရှက်တယ်…”
” မလိုချင်ဘူး…သီတာ သိပ်ရှက်တယ်…”
ဒက်ဒီဟာ သီတာစိုးစောက်ဖုတ်ကို မျက်နှာလွှဲလိုက်သလား…ဝေးပါသေးတယ်။ တစ်ခါထဲ အို…ကျမတောင် ပြောရ မှာ ရှက်မိတယ်။ ဒက်ဒီလေ…သီတာစိုး စောက်ဖုတ်ကို မျက်နှာအပ်ပြီး တပြတ်ပြတ်ယက်ပေးနေလေရဲ့…။ ဟိုကောင်မ သီတာစိုးက ဘာလုပ်သလဲသိလား…ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ဖြဲပေးပြီး ဖင်ကိုကော့ကော့ပေးနေလေရဲ့…။ သူ့လက်သည်းရှည်ကြီး တွေနဲ့ အဖိုးတန်အိပ်ယာခင်းကို အားမနာတမ်းကုတ်ခြစ်နေလေရဲ့…။
ဒက်ဒီဟာ စောက်ခေါင်းထဲကို သူ့ခေါင်းကြီးနဲ့လိုးမတတ် သီတာမိုးစောက်ဖုတ်ကို ယက်ပေးနေပါတယ်။
” အိုး…သူ့နှုတ်ခမ်းမွှေးကြီးတွေက သိပ်…သိပ်…အိုး…ဟင်း..ဟင်း….နှုတ်ခမ်းမွှေးနဲ့ မကလိပါနဲ့ဆို….ဒီမှာမနေတတ် တော့ဘူး…အိုး…အင်း….ဟင်း….”
ကြားရတဲ့အသံက နားမချမ်းသာစရာ ရမက်သံပေမယ့် ကျမဒူးတွေ မခိုင်ချင်တော့ဘူး။ ကျမရဲ့ပေါင်ရင်းဆီက ယား ကျိကျိဝေဒနာကို ခံစားနေရတယ်။ ဒါကြောင့် အဓိပ္ပာယ်မဲ့ ပေါင်ခြင်းပွတ်နေမိတယ်။
အံကိုကြိတ်ပြီးအသံစူးစူးလေးနဲ့ မချိမဆန့်အော်သံကြောင့် ကျမသူတို့ဆီကိုအာရုံပြန်ရောက်သွားရပါတယ်။ သီတာစိုး တစ်ယောက် ဒက်ဒီ့ခေါင်းကို ကိုင်ပြီးအတင်းပဲ စောက်ဖုတ်နဲ့ဖိကပ်ပေးထားတယ်။ သူကိုယ်တိုင်လည်း တစ်မိနစ်ကျော်ကျော် လောက် ခါးကြီးကော့ပြီး ဆတ်ဆတ်ခါနေတယ်။
မွှေ့ယာထူကြီးပေါ်ကို ကောင်မရဲ့ဖင်ကြီးပစ်ကျသွားသံပါပဲ…။ ဒက်ဒီမျက်နှာကလည်း သူ့ဖင်နဲ့အတူ အောက်ကိုငိုက် ပါသွားတယ်။ ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ ဒက်ဒီရယ်…။ ဒီလောက်တောင် တဏှာကြီးရသလား…။
” ဒါဆို သုတ်ပေးလေ…”
ဟုတ်ပါတယ်ရှင်…ဒက်ဒီမျက်နှာဟာ ပေကျံပြီး ပြောင်လက်နေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပါးစပ်တဝိုက်နဲ့ မေးစေ့မှာပါ။ ဒက်ဒီသုတ်ခိုင်းလိုက်တော့ သီတာစိုးက ဒက်ဒီမေးစေ့ကို တယုတယကိုင်ပြီး လက်ကိုင်ပုဝါနဲ့ သုတ်ပေးမလို့ လုပ်တော့…
” ဟဲဟဲ…ကိုယ့်မျက်နှာကို နမ်းပြီးသုတ်ပေး…”
သီတာစိုးဟာ ဒက်ဒီကို အပိုင်ကိုင်ထားနိုင်ပြီဆိုတာ ကျမသိလိုက်ပါတယ်။ သိပ်လည်းလှပြီးတော့ အယုအယက လည်းကောင်းပါတယ်။ ကြည့်လေ…ဒက်ဒီခိုင်းတာကို မျက်စောင်းလေးတစ်ချက်သာချိတ်ပြီး သူ့ဘေးမှာ ဝင်လှဲနေတဲ့ ဒက်ဒီ မျက်နှာကို လိုက်နမ်းနေတာ အနှံ့ပဲ…။ ပြီးတော့ လျှာနဲ့လည်း လျှောက်ယမ်းနေသေးတယ်။ ဒီကောင်မအပျိုမှ ဟုတ်ရဲ့လား မသိဘူး။ ဒက်ဒီဟာ သူ့ရဲ့အင်္ကျီကိုချွတ်လိုက်ပြီး တဖန်ဘောင်းဘီကိုလည်း ချွတ်လိုက်ပြန်တယ်။ ကျမသတိပြန်ဝင်လာပြီး ကြည့်လိုက်တော့ ကျမရဲ့ ရင်ထဲမှာ အေးကနဲဖြစ်သွားရပါတယ်။ ဒက်ဒီဟာ သီတာစိုးရဲ့ ထဘီကို အသာဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်ပြီလေ…။ ဖြူဖွေးလုံးကျစ်ပြီး ဖြောင့်စင်းတဲ့ပေါင်တန်တွေဟာ သူမဝတ်ထားတဲ့ပင်တီအနက် ထဲကနေ ထိုးထွက်နေလေရဲ့…။ စောက်ဖုတ်နေရာဟာ ဖောင်းမို့နေလိုက်တာလေ…ကျမတောင် သီတာစိုးကိုကြည့်ပြီး တပ် မက်စိတ်တွေပေါ်လာတယ်။ ဒက်ဒီဆိုတဲ့ မုဆိုးဖိုယောက်ျားကြီးတစ်ယောက်တော့ ပြောမနေနဲ့တော့…။
သီတာစိုးဟာ ဒက်ဒီကို အပိုင်ကိုင်ထားနိုင်ပြီဆိုတာ ကျမသိလိုက်ပါတယ်။ သိပ်လည်းလှပြီးတော့ အယုအယက လည်းကောင်းပါတယ်။ ကြည့်လေ…ဒက်ဒီခိုင်းတာကို မျက်စောင်းလေးတစ်ချက်သာချိတ်ပြီး သူ့ဘေးမှာ ဝင်လှဲနေတဲ့ ဒက်ဒီ မျက်နှာကို လိုက်နမ်းနေတာ အနှံ့ပဲ…။ ပြီးတော့ လျှာနဲ့လည်း လျှောက်ယမ်းနေသေးတယ်။ ဒီကောင်မအပျိုမှ ဟုတ်ရဲ့လား မသိဘူး။ ဒက်ဒီဟာ သူ့ရဲ့အင်္ကျီကိုချွတ်လိုက်ပြီး တဖန်ဘောင်းဘီကိုလည်း ချွတ်လိုက်ပြန်တယ်။
ဒက်ဒီ အူသိပ်မြူးနေတယ်။ မယားအသစ်စက်စက်လေးက သိပ်လိမ္မာနေတယ်လေ။ ပြုံးဖြီးဖြီးနဲ့ သီတာစိုး လက်ကို ယူပြီး သူ့လီးကြီးပေါ်ကို အသာတင်ပေးလိုက်တယ်။ ကြည့်ပါအုံး…နီရဲပြီးအကြောပြိုင်းပြိုင်းဖြစ်နေတဲ့ လီးကြီးနဲ့ ဖယောင်းလို နူးညံ့ဖြူဖွေးနေတဲ့ လက်ချောင်းကစ်ကစ်လေးတွေဟာ ယှဉ်တွဲလို့…။ လီးအုံကြီးအထက်နား လီးအရင်းကနေ ဆုတ်ကိုင်လိုက် တော့ အပေါ်မှာ လက်သုံးလုံးစာလောက် လွတ်နေတယ်။ ပြီးတော့ လက်ချောင်းလေးတွေက တပတ်မဆုတ်မိဘူး။ လီးလုံး ပတ်ကကြီးတော့ ကြားမှာလက်နှစ်လုံးလောက်လွတ်နေတယ်။
” ကစ်…ပေးလိုက်ပါလား သီတာလေးရယ်…ကလေးက ဘယ်လောက်သဘောထားကောင်းတယ်ဆိုတာ သိရတာ ပေါ့…”
သီတာစိုးက ဒက်ဒီ့ကိုကြာကြည့်လေးကြည့်ပြီး လီးပေါ်မျက်နှာအပ်လိုက်တယ်။ သူ့ဆံပင်တွေက ထွေးကနဲ ဒက်ဒီ့ ပေါင်ရင်းပေါ်ကို ကျလာလို့ ဘာမှမမြင်ရတော့ဘူး။
အို…သိပ်အိနြေ္ဒကြီးတဲ့ ဒက်ဒီတစ်ယောက် ဘယ်လိုဖြစ်သွားရတာလဲ…ကြည့်လေ…ခါးကြီးက ကော့လိပ်ပြီး ဖြစ်နေ လိုက်တာ…သီတာစိုးခေါင်းက နိမ့်လိုက်မြင့်လိုက်နဲ့…မတော် စိတ်ပေါက်ပြီး ဒက်ဒီလီးကို ကိုက်ဖြတ်လိုက်ရင် ဒုက္ခ…။ ဒက်ဒီ ကိုကြည့်အုံး…သူ့ဖက်ဖင်ပေးပြီး ကြုံ့ကြုံ့လေးမိန်းမထိုင် ထိုင်နေတဲ့ သီတာစိုးရဲ့နောက်ကို ပြူးပြူးလေးထွက်နေတဲ့ စောက် ဖုတ်ထဲကို လက်ခလယ်ထိုးသွင်းပြီး ထုတ်ချီသွင်းချီမွှေချီ လုပ်နေတယ်။ သီတာစိုးကလည်း ဖင်လေးတကြွကြွနဲ့ပေါ့။ စောက် ဖုတ်ထဲက အရည်တွေ ထွက်နေတယ်ထင်ပါရဲ့…။
ပြန်မော့လာတဲ့ သီတာစိုးရဲ့ပါးစပ်မှာ ဒက်ဒီ့အရည်တွေ ပေနေတယ်ဆိုတာတော့ ပြောစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူး…။ ကောင်မက သူ့နှုတ်ခမ်းကို သူ့လျှာနဲ့ပြန်ယက်နေတယ်။ ဒါကို ဒက်ဒီက ကြည်ကြည်နူးနူးနဲ့ အားမလိုအားမရ ငေးကြည့်နေ လေရဲ့…။ ဒက်ဒီ့လီးကြီးက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပြန်ပျော့သွားပါပြီ။ နှစ်ယောက်သားငြိမ်ပြီး အတော်ကြာကြာဖက်ထားကြတယ်။ မငြိမ်တာကတော့ ကျမပါပဲ…။ ကြည့်လေ…ဘယ်လိုကနေ ဘယ်လို ကျမလက်က ကျမစောက်ဖုတ်ကို ပွတ်မိနေတယ်မသိ ဘူး။ နိုင်လွန်ပင်တီလေးအောက်ကနေ စောက်ဖုတ်လေးက နူးညံ့တဲ့အထိအတွေ့ကိုပေးနေတယ်။ အားမရပါဘူး…ပူလောင် တဲ့ မြင်ကွင်းတွေကို တွေ့နေရတာကိုး…။ ဒါကြောင့်ကျမဟာ ကျမဘာသာပင် သတိမထားမိဘဲ လှန်တင်ထားမိတဲ့ထဘီကို ချွတ်ချလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ပင်တီကို အသာချွတ်လိုက်တယ်။ စောက်ဖုတ်လေးဟာ လန်းသွားသလိုပဲ…။ စောက်ဖုတ်နဲ့ လက်ဟာ ဘာမှအခုအခံမရှိဘဲ တွေ့မိကြတယ်။ ကြက်သီးဖြန်းကနဲ ထသွားမိတယ်။ နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ဖက်ကို လက်ညှိုးနဲ့ လက်သူကြွယ်နှစ်ခုနဲ့ဖိပြီး အမွှာနှစ်ခြမ်းကို ဟလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ လက်ခလယ်ကို မြောင်းထဲဖိချလိုက်တယ်။ တကိုယ်လုံး ဆတ်ဆတ်တုန်ပြီးတော့ ချွေးတွေပျံလာတယ်။ စောက်ဖုတ်ကို အလျားလိုက် လက်ခလယ်နဲ့ ဆွဲကြည့်မိတယ်။ ဘယ်လိုပြော ရမလဲ။ လျှပ်စစ်နဲ့အတို့ခံရသလို ခံစားလိုက်ရတယ်။ ကျမ မနေနိုင်တော့ဘူး။ စောက်စေ့ကို အသာလေး ကလိပေးနေမိ တယ်။
အံသြစရာကောင်းလောက်အောင် လက်ချောင်းလေးတွေပေါ်ကို ပူနွေးစေးပြစ်တဲ့အရည်တွေ ပွက်ကနဲကျလာတယ်။ မရဲတရဲနဲ့ စောက်ခေါင်းထဲကို လက်ခလယ်ကို ချော့သွင်းလိုက်မိတယ်။
” ဖြစ်ပါ့မလားကိုကြီးရယ်….သီတာ ကြောက်တယ်….”
” မကြောက်ပါနဲ့ အချစ်လေးရယ်…ကိုကြီး အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးပါ့မယ်…ကလေးနာအောင် မလုပ်ပါဘူးနော်… …”
” အင်းနော်….သိပ်ကြမ်းရင် ငိုမှာပဲ…”
” အေးပါ….အပေါ်ရော အောက်ရော ငိုပေါ့….”
သီတာစိုး တကယ်ပဲစိတ်ဆိုးသွားပုံရတယ်။ မျက်နှာရဲသွားတယ်လေ။
” ကြည့်…ချစ်တယ်ဆိုပြီး သိပ်ဆိုးတယ်…အကိုကြီးက ချစ်လို့စတာပါ…”
” အကိုကြီး….သီတာက သဘောလွယ်လို့ သီတာ့ကို ကလေကချေလို ဆက်ဆံနေတာလား….”
” ဒါဘဲနော်….ပြီးမှ ဖျာလိုခင်းပြီး မနင်းနဲ့…”
ရယ်ရင်းမောရင်းနဲ့ ဒက်ဒီဟာ ပက်လက်လှန်ပြီးအိပ်နေတဲ့ သီတာရဲ့ပေါင်ကြားကို ဝင်ထိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သီတာစိုးကို တစောင်းအနေအထားလုပ်ပေးလိုက်ပြီး အောက်ဖက်က ခြေတစ်ဖက်ကိုအလျားလိုက်ဆန့်ထားပြီး နောက်တစ် ဖက်ကို ရင်ဘတ်နဲ့ထိတဲ့အထိ ကွေးပြီးမထားပါတယ်။
” အို…အကိုကြီး ဘယ်လိုတွေလျှောက်လုပ်နေတာလဲ….ဟင်း…ကိုကြီးရယ်….သီတာအနေခက်လိုက်တာ…”
” အိုး….ကလေးကလည်း ခဏလေး…ကြာရင် ဒီလိုအမြဲနေချင်တယ်လို့ ဖြစ်သွားမယ်…”
ချစ်သူခေါ်မလား ဘာလားတော့မသိဘူး…သူတို့နှစ်ယောက်ပလူးပလဲလုပ်နေတာ ကျမကြည့်ပြီး အထီးကျန်သလို ခံစားရပါတယ်။ ကျမချစ်သူက ကျမကို တစ်ရက်ထဲအားရအောင်လိုးပြီး မလေးရှားမှာ အလုပ်သွားလုပ်တာ ခုဆို (၃)လ တောင် ကျော်သွားပါပြီ။ ကျမကတော့ ဆန့်တငံ့ငံ့နဲ့ အထီးကျန်နေခဲ့ရတာပေါ့။ ပေါင်တစ်ချောင်းဆန့် တစ်ချောင်းကွေးကာ မပြီးဖြဲထားတဲ့ သီတာစိုးရဲ့ စောက်ဖုတ်ဟာ ကော့နေတဲ့ဖင်ကြားအောက်ကနေ ပြူးထွက်နေတယ်။ ဒက်ဒီက လက်တစ်ဖက်နဲ့ သူ့လီးကြီးကို ကိုင်ပြီး အဲ့ဒီဟတတဖြစ်နေတဲ့ စောက်ဖုတ်ဝမှာ တေ့လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဆက်မသွင်းသေးဘဲ အဝမှာတင် ရှေ့တိုးနောက်ငင်နဲ့ လုပ်ပေးနေတယ်။ သီတာစိုးဟာ အားမလိုအားမရနဲ့ ဖင်ကြီးကို ကော့ကော့ပေးရင်း…
ငိုတော့မလို မဲ့မဲ့လေးပြောလိုက်တဲ့အသံလေးဟာ ကျမအသွေးအသားတွေကို ဆူဝေစေပါတယ်။ ကျမလက်ဖျားတွေ ဟာ တုန်ရီပြီး အာခေါင်တွေဟာ ခြောက်လာရပါတယ်။ ပြီးတော့လည်း ဒူးက မခိုင်တော့ပါဘူး။ ကျမစောက်ဖုတ်ထဲက တစုံတရာကို တောင်းတနေတယ်ဆိုတာ ကျမသိတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ…အနားမှာရှိတဲ့ ကုလားထိုင်ကိုဆွဲပြီး ခြေ ထောက်တစ်ဖက်ကို ဒူးကွေးပြီး ခြေဖဝါးက ကုလားထိုင်ပေါ်မှာ ထောင်ထားလိုက်ပါတယ်။ အခုဆို ကျမနဲ့ သီတာစိုးဟာ လှဲနေတာနဲ့ မတ်တပ်ရပ်နေတာပဲ ကွာတော့တယ်။
ကျမ အာရုံပြန်ပြောင်းလိုက်ရတယ်။ ဒက်ဒီဒစ်ကြီးဟာ သီတာစိုးရဲ့စောက်ဖုတ်ထဲကို မြုပ်ဝင်သွားပြီး သီတာစိုး ခမျာ မွေ့ယာခင်းကို အတင်းဆုတ်ထားရတယ်။ ဒက်ဒီကတော့ သူ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကို ကွေးပြီး သီတာစိုးရဲ့ပြောင်လက်နေတဲ့ ဖင်သားဖွေးဖွေးကြီးကို လက်ဝါးနဲ့အသာပွတ်ပေးနေတယ်။ သူကတော့ တစောင်းဖြစ်နေတဲ့ သီတာစိုးရဲ့ဆန့်ထားတဲ့ပေါင်တစ် ချောင်းကို ခွပြီးထိုင်နေလေရဲ့…
အို…ဒက်ဒီက ရက်စက်လိုက်တာရှင်…ဟုတ်တယ်။ ကျမ သီတာစိုးကို ဘယ်လောက်မုန်းမုန်း မိန်းမချင်းတော့ ကိုယ် ချင်းစာတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒက်ဒီဟာ ကွေးထားတဲ့ သီတာစိုးရဲ့ခြေထောက်ကို ရင်ဘတ်ထိအောင်ကွေးထားရာက နေ ဘေးတိုက်ဖြဲလိုက်ပြီး သူ့လီးကို စောက်ခေါင်းထဲကို အဆုံးထိ သွင်းလိုက်လို့ပါပဲ။ သီတာစိုးရဲ့ အော်သံဟာ ကျမရဲ့ရင်ထဲ မှာ ပဲ့တင်ထပ်သွားပါတယ်။
” ဗြစ်…ပြွတ်…ဗြစ်…ဒုတ်…ပြွတ်…စွပ်…စွပ်….အ…အား…အား….ပြွတ်…ပလွတ်…ဒုတ်…ဗြစ်…စွပ်…စွပ်….အင့်… အင်း…အင်း…ဟင်း…ဟင်း….”
အို…မိန်းမဖြစ်ရတာ မသက်သာလိုက်တာရှင်…။ သီတာစိုး ခမျာ မချိမဆန့်ခံစားနေရတယ်။ ဒက်ဒီကတော့ အားရပါး ရကြီးကို လိုးလို့နေတော့တာပါပဲ။ သီတာစိုးရဲ့ တကိုယ်လုံးဟာ ဗရမ်းဗတာရမ်းခါပြီးနေတယ်။ နို့ကြီးတွေဆိုတာ ပြုတ်ထွက် တော့မလားပဲ။ ဒက်ဒီလီးကြီးက သီတာစိုးစောက်ပတ်ထဲကို အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ဝင်ဝင်သွားတာ ကြောက်စရာကြီးပါပဲ။ မျက်စေ့ နှစ်လုံးစုံမှိတ်ထားတဲ့ သီတာစိုးရဲ့ ပါးစပ်လေးဟာ ဟဟသွားပြီး လျှာကလေးက တစ်လစ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်သွားရပါတယ်။ သူတို့ကိုကြည့်ရင်းနဲ့ ကျမရဲ့စောက်ခေါင်းထဲကို လက်ညှိုးနဲ့ထုတ်ချီသွင်းချီလုပ်နေမိတယ်။ သိပ်ကောင်းတာပဲရှင်…။ ခုတော့ သီးခံပြီးဒီလိုပဲ ကျေနပ်ရတာပေါ့။ ကျမရဲ့စောက်ဖုတ်ဟာ လက်ညှိုးကို ငုံမိအောင်ကို ကျဉ်းသွားပါတယ်။ ပြီးတော့ ပူနွေးလာ ပြီး မကြာခင်မှာပဲ ကျမရဲ့လက်ညှိုးကို စောက်ခေါင်းက ဆွဲစုပ်ပါတော့တယ်။
ဘယ်လိုပဲကြိတ်မှိတ်နေပေမယ့် ကျမရဲ့ရင်ခေါင်းထဲက ပြင်းထန်တဲ့သက်ပြင်းချသံတွေ အသက်ရှူသံတွေထွက်နေရ ပါတယ်။
ကျမဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမသိဘူး….။ တကိုယ်လုံးအကြောတွေဆွဲပြီး စောက်ခေါင်းထဲက အရည်တွေဟာ ဝေါကနဲ ကျသွားပါတော့တယ်။ ကြမ်းပြင်မှာ အိုင်ထွန်းသွားမှာကတော့ သေချာပါတယ်။ ကျမ သိပ်မောသွားပြီ…ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ရမက်တွေ ငြိမ်စပြုတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို သတိရမိတယ်။
” အိ…အိ….အား…ကိုကြီးရယ်…ကောင်းလိုက်တာ….အိ….အား…အင့်…အို…ဗြစ်…စွပ်…ဒုတ်…ဒုတ်…အဟား….. အမေ့…အား….အင်း….”
ဒက်ဒီရော သီတာစိုးပါ ချွေးဒီးဒီးကျနေတယ်လေ။ ဒက်ဒီလည်း အံကြီးကြိတ်ပြီး အားပါးတရဆောင့်လိုးနေလိုက်တာ မျက်နှာကြီးနီလို့ သီတာစိုးဆိုတဲ့ မိန်းမက စောစောကလို မဟုတ်တော့ဘူး….။ ဖင်ကိုလိမ်ပြီး ကော့ကော့ပေးတယ်…သူ့ စောက်ဖုတ်ကို ပိုပြီးပေါ်လွင်အောင်လို့လေ…။ လီးကြီးဝင်တိုင်းထွက်တိုင်း စောက်ဖုတ်ဟာ ကြုံ့ဝင်သွားလိုက် ပွပြီးထွက်လာ လိုက်နဲ့ ကျမဖြင့် ဖင်တောင်ကျိန်းမိတယ်။ သူတော့ ဘယ်လိုနေမလဲမသိဘူး…။
သီတာစိုးတစ်ယောက် တကိုယ်လုံး တွန့်လိမ်ကော့ပျံသွားပါတယ်။ ခဏနေမှ ငြိမ်သွားလေရဲ့။ ဒက်ဒီကတော့ ဆက် လုပ်နေတုန်းပဲ။ ဒီတစ်သက်မှ ပြီးပါတော့မလားမသိဘူး….အို…
သီတာစိုးရဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကို လက်မောင်းနဲ့ပိုက်ပြီး ကျန်လက်တစ်ဖက်က ဖင်သားကြီးကို အတင်းဆွဲပြီး လီးကြီးကို ခေါင်းကနေပေါက်ထွက်သွားမတတ် ဆောင့်သွင်းပြီး ကျေနပ်သံကြီးနဲ့ တအားအားအော်နေတယ်။ သီတာစိုး လည်း ကော့တက်သွားပြီး ဒက်ဒီလီးကြီးကို စောက်ဖုတ်နဲ့ညှစ်ပေးပြီး စုပ်ယူပေးနေပုံပဲ။
ဒက်ဒီဟာ သီတာစိုးရဲ့ကိုယ်ပေါ်ကို မှောက်ချလိုက်ပြီး ဇိမ်ယူပြီး မှိန်းနေတော့တယ်။ ခဏအကြာမှာပဲ သီတာစိုးက လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်လာပြီး…
” အကိုကြီး…ထတော့လေ…သီတာကို ပြန်ပို့ပေးအုံးပေါ့….”
ဒီလိုပြောလိုက်တော့မှ ဒက်ဒီက ကြုံး၍ထလိုက်ပြီး သီတာစိုးစောက်ဖုတ်ထဲက သူ့လီးကြီးကို ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။ ပျော့သွားတယ်ဆိုပေမယ့် ခွေကျမသွားသေးဘဲ အရည်တွေတမြားမြားနဲ့ ဒက်ဒီလီးကြီးကို ကျမဟာ အသေအချာလိုက်ပြီး ကြည့်မိနေပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာ ဒက်ဒီရဲ့ အိပ်ခန်းထဲမှာ တဆက်တည်းရှိတဲ့ ရေချိုးခန်းထဲကို ဝင် သွားကြပါတယ်။ ကျမလည်း ကျမအဝတ်အစားတွေကို သေချာပြင်ဝတ်လိုက်ပါတယ်။ ဝတ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပဲ တဖက်ခန်း က အသံကြားလို့ ချောင်းကြည့်လိုက်တော့ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံး ရေချိုးခန်းက ပြန်ထွက်လာခဲ့ပြီး အဝတ်အစားတွေ ဝတ် နေကြပါပြီ။ ဒီအချိန်မှာပဲ ကျမဟာ အခန်းထဲက အသာလေးပြန်ထွက်ခဲ့ပြီး အိမ်ရှေ့က ဆင်းကာ အိမ်ဘေးမှာရပ်ထားတဲ့ ကား ထဲကို ဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သုံးလေးမိနစ်လောက်အကြာကျမှ ကျမကားကို အိမ်ရှေ့ဆင်ဝင်အောက်ထိ မောင်း သွင်းခဲ့ပါတယ်။ အခုမှရောက်တဲ့သဘောပေါ့…။ ကျမကားရပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲ အိမ်ထဲကထွက်လာတဲ့ ဒက်ဒီနဲ့ သီတာစိုး တို့ကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ ကျမက ဘာမှမပြောဘဲ နားလည်မှုရှိတဲ့သဘောနဲ့ သူတို့ကိုပြုံးပြီး လက်ပြကာ ကားထဲက ထွက်လာ တဲ့အချိန်မှာပဲ သူတို့နှစ်ယောက်က ဒက်ဒီကားထဲကို ရောက်သွားကြပါပြီ။ ကျမက ခပ်တည်တည်ပဲ အိမ်ရှေ့တံခါးကနေ အိမ် ပေါ်ကိုတက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲ ဒက်ဒီကားဟာ ငြိမ့်ကနဲ ထွက်သွားပါတယ်။ ကျမလည်း အိမ်ရှေ့တံခါးကို သေချာသော့ခတ် ပိတ်ပြီး ဝင်လာခဲ့ရာမှ ဧည့်ခန်းထဲလည်းရောက်ရော ခြေပစ်လက်ပစ်ထိုင်ချလိုက်မိပါတော့တယ်ရှင်….။
“ဖြိုးညီရဲ့ ဆေးထိုးလီး နဲ့ မမ”